တရုတ်ဆေးဖက်ဝင်အပင်များ fructus chaenomeles speciosa mu gua ဆေးဖက်ဝင်အပင်များစက်ရုံနှင့်ထုတ်လုပ်သူ |Drotrong
တရုတ်ဆေးဖက်ဝင်အပင်များ fructus chaenomeles speciosa mu gua ဆေးဖက်ဝင်အပင်
Chaenomeles Speciosa (木瓜၊ Chinese Quince, fructus chaenomelis, mu gua, chaenomeles) သည် mugua (သစ်သီး) ဟုခေါ်သော တရုတ်ပန်းပွင့်သော quince ၏အသီးကို ရည်ညွှန်းသည်။သာမာန်သင်္ဘောသီးဖြစ်သည့် mugua ကဲ့သို့ အရှေ့တိုင်းအစားအစာဈေးကွက်များတွင် ရောင်းချသည့်ပစ္စည်းနှင့် မရောထွေးသင့်ပါ။တရုတ်ဆေးဖက်ဝင်အပင်များ အတွက် Chaenomeles speciosa မှ မှည့်ခြောက် အသီးအနှံများကို ရွေးချယ်ထားပါသည်။
အသည်းနှင့် အရွတ်များကို ပြေလျော့စေပြီး အစာအိမ်ကိုလည်း ညီညွတ်စေပြီး စိုစွတ်မှုကို ဖယ်ရှားပေးသည်။စိုစွတ်ခြင်း အဆစ်အမြစ်ကိုက်ခဲခြင်းနှင့် ကျုံ့ခြင်း၊ ပြင်းထန်သော အက်ဆစ်နှင့် ခါးနှင့် ဒူးဆစ်များ နာကျင်ခြင်း၊ အော့အန်ခြင်းနှင့် ဝမ်းလျှောခြင်း၊ အရွတ်လွှဲပြောင်းခြင်းနှင့် ဘေရီဘာရီ ဖောရောင်ခြင်းတို့အတွက် အသုံးပြုသည်။
Chaenomeles Speciosa ဆိုတာဘာလဲ။
Chaenomeles Speciosa သည် ဆေးဖက်ဝင်၊ စားသုံးနိုင်သော၊ ကျန်းမာရေးနှင့် တန်ဆာဆင်မှုတန်ဖိုးရှိသော အဖိုးတန်သစ်သီးတစ်မျိုးဖြစ်သည်။၎င်းတွင် ရှည်လျားသော စက်မှုကွင်းဆက်၊ ကြီးမားသော ပို့ကုန်နေရာနှင့် ကျယ်ပြန့်သော အလားအလာရှိသည်။ရှေးယခင်ကကတည်းက ၎င်း၏ ပန်းများနှင့် သစ်ပင်များကို ကြည့်ရှုရန်၊ အသီးအနှံများအတွက် ဆေးဝါးအဖြစ်သာမက ကမ္ဘာပေါ်တွင် အရည်အသွေးကောင်းမွန်သော တရုတ်ဆေးဖက်ဝင်အပင်များအဖြစ် ကျော်ကြားလာခဲ့သည်။China Shanghai Institute of Medicines နှင့် အခြားသော ယူနစ်များ၏ ပူးတွဲဆုံးဖြတ်ချက်အရ Chaenomeles Speciosa သည် လူ့ကိုယ်ခံအားစနစ်ကို မြှင့်တင်ပေးနိုင်ပြီး၊ ကျယ်ပြန့်သော ဘက်တီးရီးယားများကို နှိမ်နင်းရန်အတွက် olenolic acid ပါရှိပြီး တိုက်ဖွိုက်၊ ဝမ်းကိုက်ရောဂါနှင့် ရွှေရောင်စတီဖီလိုကော့ကပ်အတွက် ပြင်းထန်သော တားဆေးအာနိသင်ရှိသည်။
ပင်ယဉ်အမည် Mu Gua
အင်္ဂလိပ်အမည် Chaenomeles Speciosa
လက်တင်အမည် Fructus Chaenomelis
ရုက္ခဗေဒအမည် Chaenomeles speciosa (မွှေး) Nakai
အခြားအမည် တရုတ် quince၊ fructus chaenomelis၊ mu gua၊ chaenomeles
အနံ့နှင့်အရသာ အနံ့မွှေးပြီး အချဉ်အရသာ အနည်းငယ်ရှိသည်။
သတ်မှတ်ချက် အလုံး၊ အချပ်၊ အမှုန့် (လိုအပ်ပါက ထုတ်ယူနိုင်ပါတယ်)
သိုလှောင်မှု အေးပြီး ခြောက်သွေ့သောနေရာတွင် သိမ်းဆည်းပါ၊ အလင်းရောင်ပြင်းပြင်းနှင့် ဝေးဝေးတွင်ထားပါ။
တင်ပို့ခြင်း။ ပင်လယ်၊ လေကြောင်း၊ Express၊ ရထားဖြင့်
Chaenomeles Speciosa အကျိုးကျေးဇူးများ
1. Chaenomeles Speciosa သည် ကြွက်သားနာကျင်ခြင်း ဥပမာ ပခုံးနာခြင်းကို သက်သာစေသည်။
2. Chaenomeles Speciosa သည် အစာစားချင်စိတ်ကို ပိုမိုကောင်းမွန်စေပြီး အစာမကြေခြင်းကို သက်သာစေသည်။
3. Chaenomeles Speciosa သည် အောက်ခြေလက်အင်္ဂါများတွင် ရေထိန်းခြင်းကို သက်သာစေသည်။
4. Chaenomeles Speciosa သည် အစာအိမ်သဟဇာတဖြစ်မှုအတွက် စိုစွတ်မှုကို ဖြေရှင်းပေးနိုင်သည်။
5. Chaenomeles Speciosa သည် လေ-အစိုဓာတ်၊ အရွတ်များကို ပြေလျော့စေပြီး အာမခံပစ္စည်းများကို အသက်ဝင်စေပါသည်။
နမူနာများဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့၏ အရည်အသွေးကို သင်စစ်ဆေးနိုင်ပါသည်။
တရုတ်သစ်ဥသစ်ဖု Coix Seed yi yi ren Semen Coicis
Drotrong အခြောက်လှန်း poria cocos fuling ဆေးဖက်ဝင်အပင်များ
Artemisiae Apiaceae မွှေးဒေါန Qing Hao
ဆေးဖက်ဝင်အပင်ခြောက် Radix Scrophulariae figwo...
Wu Mei အစုလိုက် ဆေးဖက်ဝင် အသီးအနှံများ ဇီးသီးသောက်ဆေး...
ဆေးဖက်ဝင်အပင်ခြောက် Rhizoma Acori Tatarinowii shi...